Ny iPad koa dia ampiasaina hijerena sary vetaveta | Vaovao IPhone
Na eo aza izany fehezanteny fanta-daza nataon'i Steve Jobs izany izay nanome toky izy fa tsy natao hijerena sary vetaveta ny iPad ary «ireo izay te-hijery pôrnôgrafia mividy Android“Ny tena izy dia ny iPhone sy ny iPad, toy ireo fitaovana manolotra fidirana amin'ny Internet, dia ampiasaina amin'ny zavatra maro hafa hijerena votoaty mamoa fady. Raha ny marina dia iray amin'ireo pejy malaza indrindra manolotra atiny amin'ity karazana ity izay mifanaraka amin'ny iPhone sy ny iPad no miantoka fa amin'ny fitsidihana isan-andro 38 tapitrisa voarainy dia isa lehibe avy amin'ny takelaka Apple.
Ny pejy fanta-daza, Pornhub.com, dia manome antoka fa amin'ireo fitsidihana isanisany 38 tapitrisa isan'andro, ny antsasak'izy ireo dia vita amin'ny takelaka sy finday avo lenta, ary amin'ireo izay mifanaraka amin'ny takelaka. Ny 78% dia vita amin'ny Safari, izany hoe avy amin'ny iPad. 13,6% ihany no vita avy amin'ny Chrome, izay azo alaina ho an'ny iPad ihany koa, ary ny 7,8% ambiny dia avy amin'ny tranokala Android taloha. Ny tena mahavariana dia ny iPhone, izay ny anjarany amin'ny tsena raha oharina amin'ny finday avo lenta hafa dia ambany kokoa noho ny an'ny iPad ao anaty takelaka, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny statistikan'ilay pejy, miaraka amin'ny 38,2% ny fitsidihan'ny finday manontolo.
Tapitra ny fotoana tsy nahitan'ny iPhone sy ny iPad horonan-tsary tamin'ny ankamaroan'ny pejy, ary satria maty ny flash Amin'ny fitaovana finday, ny tranonkala dia namboarina tamin'ny safidy vaovao izay mifanaraka amin'ny Safari for iOS. Na eo aza ny ezak'i Apple mandràra ny fampiharana miaraka amin'ny atiny vetaveta ao amin'ny App Store, lehibe dia lehibe tokoa ny Internet ary ny maha-zava-dehibe ny iOS amin'ny fampiasana fitetezana tranonkala dia mahatonga ny mpampiasa azy ho lasibatra ifotony amin'ny karazan-tranonkala rehetra, anisan'izany ireo voatokana. Ho an'ireo mihoatra ny 18 taona taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny iPad koa dia ampiasaina hijerena sary vetaveta
Chuck dia hoy izy:
ALEO fandraisana anjara IRAY….
Izay fitaovana ampiasaina hijerena sary vetaveta, hahahahahahahahahaha
Mamaly an'i Chuck
Avelao PORNO hahita zavatra hafa.
Mamaly ny anarana
txuacode dia hoy izy:
Mahafinaritra kokoa ny mitondra ny iPad amin'ny trano fidiovana fa tsy imac !!?
Mamaly amin'ny txuacode
eny izany eny 🙂
Azraelx dia hoy izy:
Ho an'ny pôrnôgrafia ny Internet !!! https://www.youtube.com/watch?v=JEMsdoGRbjc
Mamaly an'i Azraelx